WAR BIXIN MUHIIM AH - oo ku Saabsan CORONAVIRUS – Beegsonews-Wararka maanta
Home Caafimaadka WAR BIXIN MUHIIM AH – oo ku Saabsan CORONAVIRUS
WAR BIXIN MUHIIM AH – oo ku Saabsan CORONAVIRUS
Warbixintan waxaan kasoo ururiyay dhowr guddi oo dhakhaatiir ah oo ka hawl gala UK, China, Japan iyo Taiwan.
Sanka hadday biyo kaa socdaan ama qoyaan aad tufayso, waa hargab caadi ah waxa ku hayaa.
Qufaca Coronavirus waa mid qallalan mana jiro qoyaan ama duuf kaasoo daadanaya.
Virus’kanu ma xamili karo kulayl yar, waxaa dili kara heer kul gaadhsiisan 26/27 degrees. Sido kale Cadceedu way dishaa markaba.
Qof qaba virus’kan hadduu hindhiso ama qufaco markaba virus’ku dhulka ayuu ku dhacaa taas oo ka dhigan hawada in aanu raacayn.
Viruskanu hadduu fuulo bir ugu yaraan 12 saacadood ayuu noolaan karaa – markaa hadaad joogto meel uu virus’kanu ka dilaacay oo biraha gawaadhida iyo wixii la mida aad taabato markaba gacmaha saabuun ku maydh ama isticmaal alcohol.
Dharka, alaabta guryaha hadduu fuulo wuxuu noolaan karaa 6-12 saacadood. Taydh/saabuun caadi ah oo aad ku maydho ayaa dili karta.
Cabidda biyo diirran waa u daawo virus oo dhan. Iska ilaali in aad cabto wax qabow.
Hadaad cid ama meel taabato Gacmahaaga markaba dhaq, waayo virus’kanu gacmahaaga wuxuu ku noolaan karaa 5-10 daqiiqo oo qudha, laakiin wax badan ayaa dhici kara 10 daqiiqo gudaheed, waxaad taaban kartaa afkaaga, indhaha ama sanka.
Si fudud ayaad ku dili kartaa viruskan, biyo diirran oo aad milix ku dartay ood ku luqluqato ayaa dili karta.
Deegaan uu ku dhacay hadaad joogto biyo badan cab.
Marka hore virus’kanu wuxuu ku dhacaa cunaha, markaa waxaad dareemi doontaa cuno xanuun muddo ku siman 3/4 casho.
Kadib wuxuu u gudbayaa dhuunta hawada (trachea) kadib wuxuu usii gudbayaa sanbabada, kadib wuxuu kugu keenayaa oof wareen (pneumonia) taasuna waxay qaadataa 5/6 casho oo kale.
Oof wareenka kadib waxaa imanaysa xummad zaa’id ah iyo neefsiga oo cidhiidhi kugu noqda.
Cabudhka caadiga ah la mid ma aha cabudhka virus’kanu. Waxaad noqonaysaa sidii qof biyo ku haftay oo kale, xaaladan hadaad dareento dhakhtar degdeg ah dalbo.
TALO kale oo muhiim ah oo ka timid dhakhaatiirta Japan ee virus’kan COVID-19 la tacaalaysa:
Haddii had iyo goor aadan biyo cabbin, virus’ku wuxuu gali karaa dhuuntaada hawada kadib sanbabada. Markaas aad ayay u khatar badan tahay.
Xanuunkan Coronavirus waxaa laga yaabaa wax astaamo ah in aadan isku arkin maalmo badan. Marka xummad ku qabato, qufac badan aad yeelato oo aad dhakhtar ku cararto waa mar sanbabkaaga 50% uu dhaawac gaadhsiiyay. Sanbabkaagu hadduu daldaloolo, finan (Fibrosis) yeesho daawo ma leh.
Dhakhaatiir Taiwan u dhashay waxay sheegeen:
haddii aad joogto meel uu virus’kanu ka dilaacay in aad tijaabo iska qaado subax kasta adiga oo gurigaaga jooga si aad u ogaato sanbabadaadu in ay caafimaad qabaan.
Qaado neefsi dhexe, kadib neefsiga isku qabo muddo 15 sikin ah. Hadaad dhamays tirto adoon qufacin, laabtuna ku xanuunin. Waxay cadayn u tahay in aadan sanbabka ku lahayn Fibrosis, waxay ku tusaysaa oo kale in aadan infection ku lahayn sanbabka.
Fadlan sii Faafi oo lasii wadaag ehelkaaga iyo asxaabta. – Digtoonaada.